Qofkii u horeeeyey oo Kenyaan ah oo u dhintay cudurka CoronaVirus - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Qofkii u horeeeyey oo Kenyaan ah oo u dhintay cudurka CoronaVirus
Qofkii u horeeeyey oo Kenyaan ah oo u dhintay cudurka CoronaVirus
Wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa xaqiijisay in qofkii u horreeyay uu ugu dhintay Cudurka Coronavirus dalkaasi. Wasaaradu waxay ay sheegtay in qofka dhintay uu ahaa Muwaadin 66 jir oo ka soo laabtay dalka Koonfurta afrika 13 bisha Maarso. “qofka geeriyooday wuxuu ahaa muwaadin u dhashay wadanka Kenya oo 13kii bishan ka yimid dalka Koonfur Afrika, isagoo soo maraya Wadanka Swaziland” sidaas waxaa lagu yiri warsaxafadeedka ay soo saartay wasaarada caafimaadka kenya
Wasaaradu waxay kaloo sheegay in bukaanka u dhintay Cudurka Coronavirus uu qabay cudurka macaanka. Dalka Kenya waxaa la diwaangaliyay ilaa 30 Kiis oo ah cudurka Coronavirus. Dhinaca kale, Dowladda Kenya ayaa qaaday tallaabooyin ay kula tacaalayso faafitaanka cudurka Coronavirus, waxayna soo rogtay Bandow ka bilaabanaysao 7 fiidnimo ilaa 5 Subaxnimo.
Previous article(Xog Qarsoon) Dilkii Gudoomiyihii G/Banaadir Eng Yariisow yaaka danbeeyo.siduu udhacay.
Next articleMaandooriyo lagu qabtay Gobolka Bari ee Puntland